Imishini yasekhishini Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Ikhishi imishini factory
Ibhokisi lesidlo sasemini likagesi lingasetshenziswa njengebhokisi lesidlo sasemini, umpheki welayisi kagesi, uhhavini wokubhaka, imbiza yesobho, ibhodwe lokubhodisa, ukuma komzimba okuncane, njengokudla okuhle ehhovisi noma ekhaya. Umklamo ohlukile futhi othuthukisiwe wokushisa uqinisekisa ukuthi ukudla kwakho kufudunyezwa ngokulinganayo, futhi usengakujabulela ukudla okunambitheka okuhle kwasekuqaleni. Ama-box wights 0.84KG futhi alingana nebhokisi lesilazi lesidlo sasemini. Akunankinga ngokuvuza uma ukufaka esikhwameni.
I-Juicer Ephathekayo Yokuthambisa Ephathekayo: Isikhungo sokudla okunempilo sezingane zakho nomndeni wakho. ISlic masticating juicer iyi-juicer ephathekayo, ehlanganisiwe, engasindi ebandayo ene-USB ukushaja, vele uyithathe, uzothola ijusi entsha, emnandi futhi enempilo noma kuphi, nganoma yisiphi isikhathi, noma ngebhizinisi, uhambo noma ikhaya. Vimbela i-oxidation, gcina ukukhipha izakhamzimba eziningi kujusi, ikunikeze ujusi onomsoco. Ngisho uginindela ungasetshenziselwa ukwenza ujamu, ukukha izitsha nokuningi.